Nalaza tao amin’ny Twitter ny “Faly Aho avy ao Tohoku” Taorian’ny Teny Tsimifaditrovana Nataon’ny Politisiana Japoney Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2017 4:50 GMT
Fiarandalamby haingam-pandeha iray (shinkansen) miasa ampahany amin'ny faritr'i Tohoku. Saripika avy amin'ny mpisera Flickr squeuel. Lisansa: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Tsy niafara tamin'ny fialan'ny minisitra fotsiny ny fanamarihana tsimifaditrovana, nofaritan'ny fampitam-baovao ho “gafy” (失言, shitsugen) avy amin'ny minisitra japoney iray mpikambana ao amin'ny kabinetra fa niafara ihany koa tamin'ny tenimiantona iray nalaza tao amin'ny Twitter ho fanohanana ny faritra Tohoku ao avaratra atsinanan'i Japana.
Tamin'ny atalata 25 avrily lasa teo dia voatatitra ny minisitra Imamura Masahiro misahana ny fanorenana indray an'i Tohoku nilaza fa “tsara indrindra” raha nahazo ny faritra Tohoku ny fihovitry ny tany sy ny tsunami tamin'ny taona 2011 (「東北だったから良かった」) fa tsy ny faritra be mponina kokoa toa an'i Tokyo. Ny tena mampihomehy tamin'ny fanehoan-kevitr'i Imamura dia noheverina ho izy no miandraikitra ny fanorenana indray an'i Tohoku taorian'ny fihovitry ny tany mahery, tsunami ary ny loza nokleary tamin'ny taona 2011, ary nampirehitra tsikera goavana.
Talohan'izany tamin'ny volana avrily, niteraka fifandirana ihany koa i Imamura taoriany ny nitsikerany ny sisa tamin'ireo voatery nafindra toerana avy amin'ny voina ara-nokearin'i Fukushima, tamin'ny nilazany avy eo fa efa tokony hody ry zareo. Avy eo izy nitrerona mpanangom-baovao iray izay nanontany azy momba ireo fanamarihana ireo nandritra ny valan-dresaka ho an'ny fampitam-baovao. Taorian'ny fanamarihana farany indrindra momba an'i Tohoku, noterena hiala ny minisitra.
Mila miala ny minisitra japoney taorian'ny fanamarihana nataony momba ny fihovitry ny tany tamin'ny taona 2011 Hoy i https://t.co/I1pwSRWiTc#MasahiroImamura #今村雅弘 pic.twitter.com/9PP4D71kIB
Niteraka tenimiantona fiaraha-mientana izay azo adika hoe “#Faly aho avy ao Tohoku” (#東北でよかった, Tohoku de yokatta) ny fanamarihan'i Imamura hoe “soa ihany fa tany Tohoku iny” (東北だったから良かった, Tohoku dattara yokatta).
Tamin'ny fahatsapana fa tsy noraharahiana sady iavonavonan'ny sangany ao Tokyo ny ankamaroan'ny lafy ambanivohitr'i Japana, indrindra taorian'ny fandravàn'ny “voina telo soson'ny” volana marsa 2011, Namoaka rehareha an-toerana tamin'ny famoahana ny sary sy ny fanehoan-kevitra momba ny faritra ny mponin'i Tohoku.
Navadika taminy ny tenin'Imamura Masahiro Minisitry ny Fanorenana indray, ary nivadika ho tenimianton'ny rehareha sy ny fanohanana, #Faly aho avy ao Tohoku.
— Vaovaon'i Sankei
Mahafinaritra i Tohoku, tokony ho avy aty hitsidika ianao tsindraindray. #Faly aho avy ao Tohoku.
Raha maha-te-ho-namana ny zava-drehetra ao Tohoku, toerana mahasondriana!
Etsy andaniny, tsy ny rehetra no taitra amin'ny fanentanana #Faly aho avy ao Tohoku. Misy ireo mpisera Twitter no miketrona kokoa tamin'ny fomba fandraisan'ny media manokana ny tenimiantona:
Na dia mahafinatra aza ny valin'ny tenirohy “Faly aho avy ao Tohoku” avy amin'ny media, tsy matoky aho fa tena miraharaha tokoa ny vahoakan'i Tohoku ny media. Tia (hampiasa ny fanehoan-kevitr'i Imamura) fotsiny ry zareo hitsikerana ny governemanta.
Mazava loatra fa azo iadian-kevitra ny ho fiantraikan'ny sioka amin'ny famoahan-dalànan'ny [politikan'ny] governemanta.
Tsara raha nahavita nanohitra an'i Imamura ny fampiasana ny teniny tamin'ny fampiasana ny “Faly aho avy ao Tohoku”, hiantefa any amin'ny sofina marenina an'ny praiminisitra sy ny kabinetrany (ny fanentanana media sosialy. Tsy hahatratra ny governemanta akory io tenimiantona io.
Hita ho mankatoa ny fanamby atrehin'ny faritra Tohoku ny sioka iray, eny fa na dia talohan'ny voina telo sosona tamin'ny taona 2011 aza:
Tsy resin'ny orana
Tsy resin'ny rivotra
#Matanjaka anatin'ny orana (#AMENIMOMAKEZU)
Miresaka sompirana ny iray amin'ny tononkalo malaza indrindra ao Japan ny sioka etsy ambony, “Matanjaka anatin'ny orana” nosoratan'i Kenji Miyazawa, poeta sady mpikatroka ara-tsosialy avy ao Tohoku prefektioran'i Iwate. Miyazawa dia nonina, namboly, nampianatra ary nanoratra mihoatra ny zato taona izao raha mbola nitoka-monina sy nahantra ny faritr'i Tohoku, namehy ny tononkalony malaza tamin'ny teny miteny amin'ny fanamby sy ny fileferan'ny mponin'i Tohoku:
Mirotsa-dranomaso izy ao anaty fahamainana
Midridridridry izy mandritra ny fahavaratra mangatsiaka
Ny rehetra miantso azy ho ‘mikato-doha’
Tsy misy ny mihira ny fankalazany
Na mandray azy am-po
ho karazan'olona toy izany aho